ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်သူများ တိုင်ကြားခံရလျှင် ထိရောက်စွာ အရေးယူမည် | ဧရာဝတီ
မေစစ်ပိုင်| October 19, 2012 | Hits:3,376
4 | | မမှန်မကန် ဆောင်ရွက်သည့် ပြဿနာများကို တိုင်ကြားသော်လည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးခြင်း အားနည်းနေသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာ (ရပ်/ ကျေး) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ အလွဲသုံးစားမှုများကို တိုင်ကြားလာပါက စိစစ်ပြီး ထိရောက်စွာ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်ကျော်စိုးက ပြောသည်။
ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများတွင် ရွေးချယ်ထားသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ပေးထားသည့် အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ရပ်ကွက်ပိုင် မြေနေရာများကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် အငှားချခြင်း၊ ရောင်းစားခြင်း၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာနေ ပြည်သူများကို အနိုင် အထက်ပြု ဆက်ဆံခြင်းများရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားလာလျှင် ထိရောက်သည့် အရေးယူခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“အာဏာ အလွဲသုံးစား လုပ်တာ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာပိုင် မြေတွေအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေရှိရင် ဘယ်သူကိုမှ မျက်နှာမလိုက်ဘူး ထောင်ချသင့်တာဆို ချပစ်ဖို့လုပ်တယ်၊ စိစစ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေအရ အရေးယူတယ်” ဟု ဦးအောင်ကျော်စိုးင ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်သည့် ပြဿနာများကြောင့် တရားရုံးများတွင် တရားရင်ဆိုင်နေကြရသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရှိနေကြောင်းလည်း သူကဆိုသည်။
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ရာတွင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်် ရပ်မိရပ်ဖ ၅ ဦးတို့က ဦးဆောင်ပြီး ဒေသနေ ပြည်သူများကို ရွေးကောက်ပွဲ ပုံစံ မဲစနစ်ဖြင့် လျှို့ဝှက်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ဒေသတချို့၊ မြို့နယ်တချို့တွင် နည်းလမ်းတကျ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း မဟုတ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်မှု များရှိနေပြီး အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်ကာ ရပ်ကွက် ကျေးရွာပိုင် မြေနေရာများ၊ ပစ္စည်းများကို ရောင်းချ၊ ငှားစားကာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ ရပ်ကွက်ရန်ပုံငွေဟု ဆိုကာ ပြည်သူများထံမှ နာမည်အမျိုးမျိုး ခေါင်းစဉ်တပ်၍ အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“ရပ်ကွက်ပိုင် ဘောလုံးကွင်း မြေနေရာကို တဦးတည်းသဘောနဲ့ ရောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မကျေနပ်လို့ လူထုက သမ္မတ အထိ တိုင်ပေမယ့် သူ့အပေါ် ထိရောက်တဲ့ အရေးယူတာမျိုး မရှိတော့ ပြည်သူက မကျေနပ်ကြဘူး” ဟု ပုသိမ်မြို့နယ် သစ်ပုတ်ကုန်း ကျေးရွာဒေသခံ တဦးက ဆိုသည်။
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ မမှန်မကန် ဆောင်ရွက်သည့် ပြဿနာများကို တိုင်ကြားသော်လည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးခြင်း အားနည်းနေသည့် နေရာများ ရှိနေသောကြောင့် အမှန်တကယ် အရေးယူပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမြို့နယ် တချို့တွင်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ကောက်ခံခိုင်းသည်ဟု ဆိုကာ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးက လစဉ် မီးသတ်ကြေး၊ လမ်းမီးကြေး၊ မီးကင်းကြေးများ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ဧည့်စာရင်း တိုင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကို အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အလှူငွေ ကောက်ခံနေခြင်းများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ထောက်ခံစာလုပ်ရင် တစောင် ကျပ် ၅ ရာပဲ၊ ဧည့်စာရင်း တပတ်တခါ တိုင်ရင် ကျပ် ၁ ရာပေးရတယ်။ ရပ်ကွက် တော်တော်များများက မကောက်တဲ့ မီးသတ်ကြေး၊ မီးကင်းကြေး ဆိုတာတွေလည်း ကောက်တယ်၊ ရပ်ကွက်ရုံးက လုပ်ထားတဲ့ အမှိုက်လှည်းနဲ့ပစ်ရင် အမှိုက်တထုပ် ၃၀၀ ကျပ် ပေးရတယ်။ ရပ်ကွက်မှာ အမှိုက်ပုံလည်းမရှိဘူး။ ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်ရင် အိမ်မှာမြေမြှုပ်ပဲ” ဟု မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်နေ ပြည်သူတဦးက ပြောသည်။
ရပ်/ ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ရာတွင် ဥပဒေအတိုင်း တင်မြှောက်ရန် လိုကြောင်း၊ ဥပဒေအထက်တွင် မည်သူမျှ ရှိမနေနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေး ပြဿနာများသည် နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ အခြေအနေကို မီးမောင်းထိုးပြသည်နှင့် တူနေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အဆိုပါကိစ္စများ လျော့နည်းသွားစေရန် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအပါအဝင် အဓိကဖြစ်သည့် ပြည်သူလူထု ကလည်း ပါဝင်ကာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးက သုံးသပ်သည်။
“စစ်မှန်တဲ့ လူထုကိုယ်စားပြုသူကို ရွေးချယ်သင့်တယ်။ နားမလည်တဲ့ ပြည်သူတွေကို အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်တာ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကို မပြင်ဆင်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာကြီးလေလေ၊ ငါသာလျင် အရှင်သခင်ဆိုတဲ့ ဝါဒ ထွန်းကားနေအုံးမှာပဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုသည့် လူတန်းစားတခု ဖြစ်နေသော်လည်း စက်တင်ဘာ လပိုင်းက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ကံကြီးကုန်း ကျေးရွာနှင့် ဇီးအုပ် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကျူးကျော် ပြဿနာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက အဆိုပါ မြေနေရာများကို ရောင်းစားခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကိုမြအေးက ဆိုသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို ရပ်ကွက်က ကြည်ညိုလေးစားပြီး သိက္ခာသမာဓိရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးကို ဥပဒေနှင့်အညီ တာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ပြဌာန်း ထားသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး များကို လစဉ်ချီးမြှင့် ထောက်ပံ့ငွေ တဦးလျှင် ကျပ် ၇၀၀၀၀ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးရုံး တရုံးလျှင် လစဉ်အသုံးစရိတ် ကျပ် ၅၀၀၀၀၊ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆၆၇၉ စု အတွက် လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေနှင့် ရုံးအသုံးအဆောင် စရိတ်ငွေ တနှစ်လျှင် ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၄၀၁၇. ၇၆ သန်း ကုန်ကျ သုံးစွဲနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရေးဆွဲနေပြီး ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ အုပ်ချုပ်ရေး နည်းဥပဒေကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပြဌာန်းနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
8 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ကိုနေ October 19, 2012 - 12:09 pm	ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ချစားမှုကို ရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတာပါ။ မြောင်းနဲ့စပ်ဆက်နေတဲ့ဒေါင်စွန်နေရာတွေဆိုရင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး မြောင်းကိုပိတ်ပြီး ဆိုင်ခန်းတွေဖွင့်နေကြတာပါ။ အဲဒါ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်။ မြောင်းကိုပိတ်လိုက်တော့ ရေကသွားစရာမရှိတော့ပဲ မြောင်းပိတ်ပြီး မိုးတွင်းအခါကျရင် ရေလျှံမှုဖြစ်နေပါတယ်။ ရပ်ကွက်အတွင်း အမှိုက်ကင်းစင်သန့်ရှင်းဖို့ဆိုတာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အုပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံကြေးကိုယူပြီး ဒေသအခေါ် သူတို့ရဲ့ အောက်စိုက်ဝင်ငွေကို ရှာနေကြတာပါ။ ဧည့်စရင်းသွားတိုင်ရင်လည်း အလှူငွေဆိုပြီးတောင်းပါတယ်။ အဲဒီအလှူငွေနဲ့ ရပ်ကွက်အတွက် သာရေးနာရေးကို လုပ်တာဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာက အဲဒီအလှူငွေက သူတို့အိတ်ထဲကိုရောက်သွားတာ။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေက ဗားစကားအရ ၀ိုင်းစားလိုက်ကြတာပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ အစဉ်အလာအရ သွားစစ်ဆေးရင်လည်း လူကြီးလာတဲ့အချိန်ပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ထားမှာပါ။ ဒီအကျင့်က မြန်မာတွေမှာ အတော်စိုးပါတယ်။ ဒါတွေကို အခြေခံက အစပြုပြင်သင့်ပအါတယ်။
Reply	swe htwe October 22, 2012 - 2:38 am	that’sright.
Reply	soesoe October 19, 2012 - 3:18 pm	ပါးစပ်နဲ့ ပြောလိုက် စာနဲ့ ပြောလိုက် အလကားအရာမရောက်တာတွေ လိုက်ပြောပြီးတော့တကယ်တမ်း မတရားလုပ်လို့တိုင်ခဲ့ ရင် တိုင်တဲ့ သူသာခံစားသွားရတာ ဒုနဲ့ ဒေးပါဘဲ ယုံတဲ့လူတွေတော့စမ်းကြည့်ပေါ့ခံစားသွားရမယ်။ကြက်သရေမရှိတဲ့ ခွေးပါးစပ်နဲ့ခွေးဥပဒေ ….
Reply	ပါကြီးဖိုး October 19, 2012 - 11:29 pm	ရေးမြို့နယ်က ကျေးရွာအတော်များများမှာ ရွာသားများမနှစ်မြို့တဲ့ ကျေးရွားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရှိနေပါတယ်။ သိရသလောက်ကတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအကြား အပေးအယူရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ မြို့နယ်နဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ အကျင့်ပျက်မှုတွေဆိုတာကလည်း ယခင်အတိုင်းပါပဲ။ လက်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကျင့်ပျက်မှုတစ်ခုကို ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးတာကြောင့် တချို့သာမာန်လက်လုပ်လက်စားတွေ ချဲကော်မရှင်ရောင်းကြတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ချဲရောင်းနေတဲ့ ရွာသားတစ်ယောက် ရဲတွေရဲ့ အလစ်အငိုက်ဖမ်းတာ ခံလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မော်လမြိုင်ထောင်မှာ တစ်နှစ်ခွဲကျခံလိုက်ရတယ်။ ရေးကနေ မော်လမြိုင်ကိုသွားဖို့ ကားငှားခတစ်သိန်းကျော်ကို အဲဒီရွာသားက ကျခံခဲ့ရတယ်။ ရေးမှာ အမှုစစ်နေစဉ်အတွင်း တရားသူကြီးနဲ့ ရဲတွေကို ပေးလိုက်ရတာကလည်း စုစုပေါင်း ရှစ်သိန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများက ရှိစုမဲ့စုရှာကြံပြီး ပေးလိုက်ကြရတာပါ။ မော်လမြိုင်ထောင်မှာ ပေးရမှာတွေကို ထည့်မတွက်ရသေးပါဘူး။ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေပေမယ့် အောက်ခြေမှာကတော့ ပန်းပန်လျက်ပါပဲ။
Reply	ဖိုးတုတ် October 20, 2012 - 11:23 am	မန်းလေးမြို့က..ပန်းချီပန်းပုနှင့်ပန်တျာကျောင်းဝင်းတွင်းကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားပါသည်။ပြင်ပမှလုပ်ငန်းရှင်၁ဦးကဖွင့်လှစ်ထားသည်ဟုသိရပါသည်။ပန်းချီကျောင်းလား…ကော်ဖီဆိုင်လားဝေခွဲလို့မရပါ၊၊အနုပညာကျောင်းတွင်းဒီလိုကျူးကျော်တာဟာမြင်မကောင်းပါ။ကော်ဖီဆိုင်မှအလုပ်သမားများလည်းဥဒဟိုနေထိုင်သွားနေသည်ကိုတွေ့ရ။ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဟာယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့
Reply	April Full October 31, 2012 - 10:06 pm	သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ် ရွှေကိန္နရီအိမ်ယာ တိုက်အမှတ် ဂ ဘေးရှိမြေလွတ်အား လမ်းနယ်ကို ကျူကျော်ပြီး မဟာဓါတ်အားလိုင်းတိုင်အားရွှေ့ပြီး ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်တစ်လုံးရှိပါသည်။
Reply	ကြီးတော် November 1, 2012 - 8:36 am	“”ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်သူများ တိုင်ကြားခံရလျှင် ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်””
မှတ်ချက်။ ။တိုင်ကြားမည့်သူကိုအရေးယူမည်ဟု နားလည်ထားပါသည်။
Reply	nay myo November 2, 2012 - 2:55 pm	လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၃)ကရပ်ကွက်စာရေးကြီး(ယခင်ထွေ/အုပ်စာရေး-ငြိမ်း)နဲ့အပေါင်းအပါတွေက ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံကို အခန်းဖွဲ့ပြီး လူနေအိမ်ခန်းလိုလုပ်ငှါးစားတာ သူတို့ထွေ/အုပ်အချင်းချင်းမို့လို့ ဘာမှအရေးမယူဘူး. ပြောတော့ ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပဲ . တိုင်တော့လည်း အရေးယူတာမဟုတ်ဘူး .